China 5T tube na-akpụ akpụ igwe na ndị na-ebu ngwaahịa | Herbin Ice Systems
Ike na-agba ọsọ: 15.625 KW.
Ike ịmị mkpụrụ kwa ụbọchị: 5000 kgs nke tubes kwa elekere 24.
Ka anyị gbakọọ na igwe 5T / ụbọchị tube ice.
Ya mere kwa ụbọchị, ọdịiche nke ọkụ eletrik bụ 30x5 = 150KWH.
(105-75) x 5 x 365 x 10 = 547,500 KWH, nke ahụ bụ ihe dị iche iche ọkụ eletrik na afọ 10.
Ọ bụrụ na ndị ahịa ahọrọ igwe igwe ice m 5T / ụbọchị, ha ga-echekwa 547,500 KWH nke ọkụ eletrik n'ime afọ 10.
Ọ bụrụ na ndị ahịa ahọrọ igwe na-enweghị igwe flake ndị ọzọ, ọ ga-etinyekwu ego iji kwụọ ụgwọ oriri eletrik na-enweghị isi, 547500 KWH.
Ego ole maka 547,000 KWH nke ọkụ eletrik na mba gị?
219,000 KWH nke ọkụ eletrik bụ ihe dị ka US $ 75,000 na China.
Nke gara aga: 3T tube igwe akpụrụ mmiri
Osote: 10T tube igwe akpụrụ